Hargaysa:Golaha Wakiilada Oo Maanta La Horkeenayo Go’aanka Kala Qaadista Labada Doorsho Madaxtooyada iyo Wakiilada | Berberatoday.com
Hargaysa:Golaha Wakiilada Oo Maanta La Horkeenayo Go’aanka Kala Qaadista Labada Doorsho Madaxtooyada iyo Wakiilada
Golaha Wakiilada Somaliland, ayaa maanta oo Salaalaso ah la horkeenaya go’aanka kala qaadista labada doorsho, kuwas oo hore u qorshaysnaa in isku mar bisha saddexaad ee sannadka inagu soo aadan haddii alle idmo la wada qabto.
Sida warar xogogaal ah ay ku heshay Shabakadda wararka ee Afkashacabka.com Madaxweynaha Somaliland Mud. Axmed Maxamed Siilaanyo, oo hore go’aan dhankiisa uga gaadhay in la kala qaado Doorashada Wakiilada iyo Madaxtooyada, ayaa Golaha Wakiilada u soo gudbin doona warqad uu kaga codsanaayo inay u codeeyaan go’aanka kala qaadista.
Xildhibaanada Golaha Wakiilada oo iyagu sii jeclaysanaaya inay sii fadhiyaan kuraasta, ayaa la filayaa inay Madaxweynaha ku raacaan kala qaadista.
Dhinaca kale waddamada Somaliland ka tageera Dimuquraadiyada, ayaa go’aankani niyadjab xun uu ku keeni doona, iyagoo filaayay inuu Madaxweynuhu go’aan ka gaadho saami qaybiga hortaagan doorashada Wakiilada. Geesta kale haddii kordhin danbe loo sameeyo Xildhibaanada hadda fadhiya Golaha Wakiilada oo baarka ka jaray sannadkii 13-aad, iyadoo la soo doortay 5-sanno oo kaliya, waxay cawaaqib xumo ku keeni doonta xuquuqdii muwaadinku xaqa u laha inuu wax doorto lana doorto.